ယ်စလီဘယ်မှာလဲ SXSW ဘတ်ဂျက်ငယ်တစ်ခုတွင်အောင်မြင်ခြင်း Martech Zone
ယ်စလီဘယ်မှာလဲ သေးငယ်တဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ် SXSW အောင်မြင်မှု
စနေနေ့, ဧပြီ 30, 2016 သောကြာနေ့, ဧပြီ 29, 2016 ယ်စလီ Faulkner
နှင့် SXSW မကြာသေးခင်ကငါတို့နောက်ကွယ်မှာကုမ္ပဏီတော်တော်များများကသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးရန်ဘုတ်ခန်းထဲမှာထိုင်နေကြတယ် ဘာလို့ SXSW မှာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှမရခဲ့တာ? လူအများစုကသူတို့သုံးစွဲသောငွေအမြောက်အများသည်အလဟ was ဖြစ်ခဲ့ပြီလောဟုပင်တွေးမိကြသည်။ နည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက်မက္ကာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
SXSW Interactive မှ 2016 အတွက်စာရင်းအင်းများ
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပွဲတော်တက်ရောက်သူများ - ၃၇,၆၆၀ (နိုင်ငံပေါင်း ၈၂ နိုင်ငံမှ)
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောပွဲတော်အစည်းအဝေးများ - ၁၃၇၇
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ပွဲတော်ဟောပြောသူများ - ၃၀၉၃
တက်ရောက်သူများအတွက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောမီဒီယာ - ၃,၄၉၃
သင် SXSW သို့မသွားပါကသင့်အတွက်ပုံဆွဲပါရစေ။ သင်ရရှိသော spam message များနှင့် telemarketing ခေါ်ဆိုမှုများကိုစဉ်းစားပါ။ ယခုအသီးအသီးတို့အားကိုယ်ခန္ဓာကိုပေးကြ။ ထို့နောက်ထိုလူတစ် ဦး စီကို Austin Convention Center ၏အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိနေရာတိုင်းတွင်ချထားပါ။ ထုတ်ကုန်တွန်းထိုးမှုများစွာရှိသဖြင့်တက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့်အရာအားလုံးကိုထုံထိုင်းအောင်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း SXSW သို့လာသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ယခုနှစ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
အောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့လမ်းကိုဖြုန်းဖို့ငွေအလုံအလောက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ၊ ငါတို့နာမည်ကဖော်ပြသလိုပဲ၊ ငါတို့ကစျေးပေါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Frank Underwood ပြောသလို အကယ်၍ ဇယားသတ်မှတ်ပုံကိုသင်မကြိုက်ပါက၊ ဇယားကိုကျော်ပါ။ လူတွေကိုလိုက်ရှာပြီးသူတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုတောင်းခံမယ့်အစားသူတို့ဆီကိုလာကြစို့။ သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရှာခိုင်းတာကိုမလိုချင်ဘူး၊ ငါတို့ကိုရှာချင်တယ်။ ဘယ်မှာ Wesley ရဲ့အယူအဆလာဘယ်မှာပါပဲ။
အစီအစဉ် ကျွန်တော့်အတွက် Waldo လိုဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ (သို့မဟုတ်သင်အမေရိကန်ကမဟုတ်ရင် Wally)
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး #NCSXSW hashtag ကိုသုံးရင် Amazon Echos ငါးခုထဲကတစ်ခုကိုလည်းရလိမ့်မယ်။
SXSW မတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးကိုမြှင့်တင်ရေးတွင်ပါဝင်ရန်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကိုရေးခဲ့သည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သစ္စာရှိဖောက်သည်များသည်အာမခံဆုအတွက်ဘာလုပ်ရမည်ကိုအတိအကျသိထားကြသည်
ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုမဖတ်နိုင်သူတွေဟာကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ရင်ကျွန်တော့်ကိုဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရင်ပါ ၀ င်နိုင်မှာပါ
ဒါဟာလှလှပပထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းလာတစ် ဦး မျှတသောကံနည်းနည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ပွဲတော်မစတင်မီရက်အနည်းငယ်က Seth Rogen သည်သူ၏စီမံကိန်းအသစ်ဖြစ်သော Waldo ရုပ်ရှင် Where's's live action ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကဒီနယ်မြေရဲ့ဘယ်နေရာမှာ Waldo စတစ်ကာများနဲ့ဖုံးနေတယ်။ နိုင်ပြီ! နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့သမ္မတဘရက်ခ်အိုဘားမားကိုတွေ့ဖို့ငါထီပေါက်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းမြင်နိုင်သောinရိယာ၌ပထမထပ်တွင်နေရာချခဲ့သည်။ ဤအရာနှစ်ခုလုံးတကယ်ထိတွေ့မှုတိုးလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှာသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ အဲဒီကြော်ငြာကို Ads နဲ့တိုးချဲ့လိုက်တယ်။
ငါတို့အရပျ၌ရှိခဲ့မဟာဗျူဟာပို။ ပင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွစ်တာနှစ်ခုစလုံးတွင် Austin forရိယာအတွက်တည်နေရာစစ်ထုတ်စက်များနှင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သွားမည့်မည်သည့် panel / session များကိုထုတ်ဝေရန်သေချာအောင်လုပ်ခဲ့သနည်း။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းဒါကမြင်တွေ့စေခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းတည်နေရာပြောင်းရွှေ့ - တွေအများကြီး။ ဤသူသည်ငါ့ကိုအစက်အပြောက်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ငါတရားဝင်နှင့်တရားမဝင်ပါတီများအများအပြားသွားကြဖို့သေချာစေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ ၀ တ်စုံတစ်မျိုးစီ ၀ တ်ဆင်ထားတယ်။ ကြင်ဖော်မဲ့ နေ့
ဒါဟာပျော်စရာကောင်းပေမယ့်အရမ်းပင်ပန်းခဲ့တယ်။ အိပ်ချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာခက်ခဲတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောရတာကိုမကြိုက်တဲ့သူတိုင်းကိုဒီလိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်အကြံမပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းတာကငါလူတွေနဲ့တွေ့ရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကအိပ်စက်ခြင်းနည်းနည်းလေးမှာအလုပ်လုပ်ပုံကိုသင်ပေးတယ်။ နောက်ထပ်သော့ချက်တစ်ခုမှာ Social Media ၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဖြစ်သည် NamecheapPR စနစ်ဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောမျက်နှာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီအကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုမည်ကဲ့သို့ဖန်တီးလိုကြောင်းကိုနက်နက်နဲနဲပြောနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံရေးအသစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့လူတွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့တုန့်ပြန်ချက်တွေယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။
အထက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်၎င်းသည်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းနံပါတ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အရေအတွက်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Twitter တစ်ခုတည်းမှာပဲငါတို့ရခဲ့တယ် 4.1 သန်းကျော်စှဲ - ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ဒီပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် $ 5,000 အောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး SXSW အတွက်မကောင်းဘူး။
လာမည့်နှစ်တွင်မည်ကဲ့သို့စားပွဲဝိုင်းဖွင့်လှစ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုနှစ် SXSW Interactive မှရရှိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ တည်ဆောက်သွားပါမည်။
Tags: 2016ဘားရက်အိုဘားမားဘတ်ဂျက်ပွင့်လင်း underwoodစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ဖရမင်းသမီးSXSWSXSW အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုSXSW Interactive မှ 2016Waldo ဘယ်မှာလဲမင်္ဂလာပါဘယ်မှာလဲစကားလုံး
Wesley Faulkner ၏အတွေ့အကြုံသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထိနည်းပညာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များစွာကိုချဲ့ထွင်ထားသည်။ နည်းပညာအပေါ်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည်ဆယ်စုနှစ်သုံးစုကျော်နည်းပညာနှင့်ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့၊ လယ်ယာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဖျော်ဖြေရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ၀ ယ်စလီသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာမြင်ကွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သူသည် Twenty မှ CNET နှင့် Tech ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်မီဒီယာဆိုင်များတွင် guest ည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Social Media အကြံပေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်၎င်းသည် Social Media angel ၀ ံဂေလိဆရာအဖြစ် AMD ၏လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ကူညီခဲ့ပြီးစီးပွားရေးမိတ်ဖက်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Shopify ကိုသင်၏ WordPress ဆိုက်နှင့်ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ပါ